ခေါင်းမာသောအရေပြားပြproblemsနာများ hyperpigmentation ကဲ့သို့ သည်လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီးကိုယ်ပိုင်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်သည်။
ခေါင်းမာသောအရေပြားပြproblemsနာများ (hyperpigmentation ကဲ့သို့) သည်လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီးကိုယ်ပိုင်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်၏မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းတွင်အရောင်ခြယ်သမှုရောဂါခံစားနေရပါကကံကြမ္မာကိုသင်သိသည်။ ဖယ်ရှားပစ်ရန်ခက်ခဲပြီးဖုံးကွယ်ရန် ပို၍ ပင်ခက်ခဲသည်။ အများအားဖြင့်၎င်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
လျှို့ဝှက် တရားရုံး၏ လျှို့ဝှက်
ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသွေးကြောများပြန့်ပွားစေသည့်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအပါအ ၀ င်အရေပြားပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေသည်ကျွန်ုပ်၏လည်ပင်းနှင့်ရင်ဘတ်တွင်အလွန်ဆိုးရွားခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့် ခေါ်ပိုမို dilated ရေယာဉ်များ။ ငါအောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာ ablative နှင့် ablative Non- လေဆာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့်သြစတြေးလျမှတိုင်းတာ - မူလကသြစတြေးလျကနေတိုင်းတာအပေါ်အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုအမှတ်တံဆိပ်အသစ်တခုကြိုးစားနေသည့်အခါမကြာသေးမီကသည်အထိထိရောက်သော (နှင့်စိတ်ဆိုးစေခြင်း) လိမ်းကုသမှုမတွေ့ရသေး ထိတွေ့မှုနှင့်ရရှိလာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ဦး စားပေးသည်။
ဒေါက်တာ Cl မှထုတ်လုပ်သည်ara Hurst နှင့် Dr. Deb Cohen-Jones တို့ကအခက်ခဲဆုံးအလှကုန်အရေပြားအခြေအနေများကိုကုသရန်အတွက် The Secret သည် ၂၀၂၀ အစောပိုင်းတွင်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဥပမာ - အချိန်မတန်မီအိုမင်းခြင်း၊ melasma နှင့်ဝက်ခြံကဲ့သို့သောအလှကုန်အလှကုန်ပစ္စည်းများအတွက်လူနာများကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလှကုန်ပစ္စည်း၏နယ်ပယ်၊ ဥပမာဒေါက်တာ Deb သည်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်သောအရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဟော်မုန်းဝက်ခြံကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များတွင်ကုသမှုခံယူနေသူဖြစ်သည်။ > အသားအရေအခြေအနေများကိုကုသရန်တစ် ဦး ချင်းချဉ်းကပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုယ်တွေ့သိခြင်းနှင့်စုံတွဲသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတီထွင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကွာဟချက်သည်ပိုင်ရှင်ကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်မည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုစုစည်းရန်ပုံသဏ္gapာန်တစ်ခုတည်းသို့ညှစ်ရန်ကြိုးစားခြင်းထက်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ကွာဟမှုဖြစ်သည်။ စောင့်ရှောက်မှုခွင့်ပြုပါတယ်ဒါပဲ။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်နေ့စဉ်လူနာအတွက်အလွယ်တကူသွားနိုင်ခြင်း၊ ရည်ညွှန်းချက်များစွာ၊ ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းရသောအချိန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများမြင့်မားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ "ဒီလျှို့ဝှက်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုသည်ဤအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြေဖြစ်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအထူးပြုလုပ်ထားသောဖော်မြူလာများကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်သည်။ တကယ်တော့ဒါဟာဓာတ်ပုံတွေမတိုင်ခင်နဲ့ပြီးနောက်ရလဒ်တွေကြောင့်ပဲအမှတ်တံဆိပ်ကိုစမ်းဖို့ကျွန်တော့်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကအထင်ကြီးလောက်စရာပဲ။
လျှို့ဝှက်တည်ထောင်သူများ - ဒေါက်တာ Deb Cohen- Jones (ဘယ်ဘက်) နှင့် Dr Clara Hurst (r)
>>> The Secret's of the Secret's of the Secretes>> “ မင်းတို့ကမင်းတို့ရဲ့ပုံမှန်နေ့ရောညပါအစိုဓာတ်ဖြည့်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေမှာငါတို့ကိုရှာမတွေ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ပါဝါနှင့်fကိုသုံးသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အရေပြားဆိုင်ရာသမိုင်းကိုအခြေခံပြီးတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဆေးညွှန်းပါ ၀ င်သောဆေးပစ္စည်းများကို Orce ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ “ လူတိုင်းသည်သင်နေထိုင်သောထူးခြားသည့်အသားအရေကိုချစ်မြတ်နိုးရန်” လူကြီးမင်းတို့အားတည်ရှိပြီးအလွန်ရိုးရှင်း။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သောရလဒ်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်လူအများအားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းမြစ်ရှာဖွေမှုမိတ်ဖက်ပြုမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သောကုထုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်မှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်သိပ္ပံနည်းကျတိုးတက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ ဒီအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အဓိကကျတဲ့အရာတွေဟာ tretinoin နဲ့ hydroquinone လိုခက်ခဲတဲ့အရေပြားအခြေအနေတွေကိုကုသဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြံပြုထားတာတွေပါ။ "နှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသန, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများနှင့်လေ့လာမှုများသူတို့ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်စျေးကွက်ထဲမှာအထိရောက်ဆုံးပဲ” ဟု Cohen-Jones ကထပ်ပြောသည်။ “ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တံဆိပ်နောက်ကွယ်ကမောင်းနှင်အားတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်မြူလာများသည်ကျယ်ပြန့်သောသုတေသန၊ သက်သေပြထားသောထိရောက်မှုနှင့်ရလဒ်များအပေါ်အခြေခံသည်။ ဆေးညွှန်းအရေပြားစောင့်ရှောက်မှုအကြောင်းပြချက်များအတွက် preion လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်အသုံးပြုသင့်သည်။ အများအားဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားသောအဝေးမှထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူလေ့ရှိသည့်ပုံမှန်စားသုံးသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများ၏သိသိသာသာသာလွန်သောစွမ်းအားကိုနားမလည်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Cohen-Jones ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ “ ကျွန်တော်တို့သွားလာရမယ့်ဆေးညွှန်းအသားအရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလမ်းကြောင်းရဲ့စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုကတော့ (အထူးသဖြင့်သြစတြေးလျမှာပထမဆုံးဖြစ်ခြင်း) ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာများကဒီပါဝင်ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဤကိစ္စတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကတန်ဖိုးတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများကိုဂရုစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများအတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲရည်ရွယ်သည်။ သေချာသည်သူတို့ကသင့်လျော်သောအကြံဥာဏ်နှင့်ပညာရေးနှင့်အတူဤပါဝင်ပစ္စည်းများလုံခြုံစွာအသုံးပြုကြောင်း rons ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၊ အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်မှာယူမှုတစ်ခုစီအပေါ်သိသိသာသာပံ့ပိုးမှုသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ "
လျှို့ဝှက် ယဉ်ကျေးမှု၏ The Secret
အသားအရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုမှာ tretinoin နဲ့ hydroquinone နှစ်ခုလုံးပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားဖွယ်ရာတွေကိုငါမေးတဲ့အခါ, Cohen-Jones ကစျေးကွက်အတွင်းရှုပ်ထွေးမှုအများစုဟာဒီအလွဲသုံးစားမှုအစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံတယ်လို့ပြောတယ် ပါဝင်ပစ္စည်းများ။ “ လူတွေဟာ retinoids နဲ့ hydroqu inone ကိုအလွန်မြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အလွဲသုံးစားပြုခဲ့ကြပြီးမသင့်လျော်သောအချိန်အတိုင်းအတာနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုမပါဘဲပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါအရေပြားပျက်စီးခဲ့သည်! ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသောရာခိုင်နှုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းများသည်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံသည်ဤအပါဝင်ပစ္စည်းများလုံခြုံစွာအသုံးပြုခွင့်ပြုသက်သေပြချက်သက်သေအထောက်အထား။ ပြproblemsနာများရှိလူနာများသည်အသုံးပြုရန်အတွက်ညွှန်ကြားချက်များကိုအမြဲတမ်းလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားနေသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထုတ်ကုန်များသည်သင်၏ပုံမှန်နေ့နှင့်ညဘက်အစိုဓာတ်ဖြည့်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ ၎င်းတို့သည်သင့်အားရလဒ်များပေးပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုဂရုတစိုက်အသုံးပြုသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သင့်အားလမ်းပြရန်အမြဲရှိနေသည်။
Hurst ကလူတိုင်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ထုတ်ကုန်များမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သည်ဟုပြောခဲ့သည် “ စိတ်ကူးကအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာကျန်းမာသန်စွမ်းသောအသားအရေကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အသားအရေသည်အမြင့်ဆုံးအခြေအနေသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ဆီကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အဖုအပိန့်ထွက်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကော်လာဂျင်နှင့် elastin တို့ကိုမပျောက်စေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အရေပြားအခြေအနေကိုသာမကဘဲ၊rosacea၊ ဝက်ခြံနှင့်အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သောခက်ခဲသောအရာများဖြစ်သော်လည်းအရေပြားကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းပြီးနောက်ထပ်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေ၏သဘောသဘာဝသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေ၏ကျန်းမာရေးကိုအမြဲထိခိုက်စေပါသည်။ "
အမှတ်တံဆိပ်သည်အခြေခံရေးဆွဲမှု ၁၃ ခုကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းကိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သီးခြားပြုလုပ်နိုင်သည်။ “ တစ်နေ့တာကုန်သွားရင်လူနာတွေကိုငါတို့ ands ကိုသုံးစေချင်တယ်။ သူတို့မှာအသားအရေကိုပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရန်နှင့်မျက်နှာပြင်အားတောက်ပစေရန်၊ အာဟာရဖြည့်တင်းရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအလင်းရောင်ပါဝင်သည့်အရာခုနစ်ခုပါရှိသည်။ ဆယ်လူလာ Repair Night Cream သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အရေပြားအတွင်းရှိဆဲလ်လည်ပတ်မှုကိုလျင်မြန်စွာတိုးမြှင့်စေရန်နှင့်ပျက်စီးနေသောဆဲလ်များကိုဖယ်ရှားပစ်သည့်အခါကျန်းမာသောအရေပြားဆဲလ်များကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်ရန်တိုက်တွန်းသည်။ တိုင်းသူရဲကောင်းတစ် ဦး လိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကဘေးထွက်, ဆဲလ်ပြုပြင်ညဉ့်မုန့်၏တက်ကြွသက်ရောက်မှုများဖြည့်စွက်ရန်အလင်းရောင် elixir ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်ရုံသာမကဆဲလ်အသစ်ပြုပြင်ပေးသည့်အရေပြားဆဲလ်အသစ်များကိုအာဟာရနှင့်ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ "
အခုနွေရာသီရောက်တော့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာအိမ်ပြင်မှာအချိန်တွေများများလာလေလေ၊ retinoids နဲ့ hydroquinone များအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်သင့်တယ်။
လျှို့ဝှက် တရားရုံး၏ လျှို့ဝှက် “ ဒါဟာအထူးသဖြင့်သြစတြေးလျကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု။ သြစတြေးလျသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပမာဏကိုတွေ့ကြုံခံစားရပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အီကွေတာနှင့်နီးစပ်ပြီးနေ့ရက်များစွာကြည်လင်သောမိုးကောင်းကင်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာနေကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးစမတ်အသားအရေနေရောင်ကာကွယ်မှုအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုတိုးမြှင့်ပေးတယ်” ဟု Hurst ကပြန်ပြောသည်။ "ဒီထဲမှာပါဝင်ပစ္စည်းများသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအရေပြားကိုအကျိုးပြုနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် Retinoids သည်အရေပြားအပေါ်၌နေရောင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကော်လာဂျင်ပျက်သွားခြင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီးများအားကာကွယ်ရန်နှင့်ဖျောက်ရန်အတွက် Hydroquinone သည် melanin ထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးလိမ့်မည်။ သင်ဤအရေးကြီးသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဆောင်းရာသီအတွက်သာကန့်သတ်ထားပါကတစ်နှစ်ခွဲဝက်အရေပြားသက်သာခွင့်များဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဤပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်သော့သည်နေရောင်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။ သင်သည် SPF 50+ ကိုနေ့စဉ်လုံ့လဝီရိယဝတ်ဆင်ပြီးသင့်အရေပြားကိုနေရောင်ခြည်မထိတွေ့စေလျှင်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လေးပတ်လောက်ပုံမှန်သုံးပြီးတဲ့အခါ၊ ငါ့အသားအရေဟာဘယ်တော့မှမရှင်းဘူး။ ကျွန်ုပ်မျက်လုံးတစ်ဝှမ်းရှိအရေပြားကိုချက်ချင်းသက်သာစေပြီးတစ်နေ့တာနှင့်ညဥ့်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းကကျွန်ုပ်၏ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရေကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းငါ့ poikiloderma နီးပါးပျောက်သွားပြီ, ငါပြောပါလိမ့်မယ်ထင်ဘယ်တော့မှမ။ ဆက်လက်အသုံးပြုမှုကြောင့်အခြေအနေကိုမြင်ရတော့မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ ဒီလိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့မျှဝေရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပါ။
Paleo ကိတ်မုန့်ကုမ္ပဏီ, Sweet Laurel ကိုတည်ထောင်သူများသည်မုန့်ဖုတ်မှသည်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်များသို့စားသုံးသူထုပ်ပိုးထားသောထုတ်ကုန်များ (ချက်ပြုတ်နည်းများဖြင့်) နှင့်အတူသူတို့၏ခရီးကိုမျှဝေကြသည်။
2021-05-06 21:20:05 | ဘဝ
Linkedin တွင် Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရသာရှိသောကျန်းမာသည့်အချိုပွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သူတို့ရှာရန်မလွယ်ကူပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါရှာတွေ့သောအခါ, ငါ့အလိုဆန္ဒတူညီတဲ့ရှာပုံတော်အပေါ်ဖြစ်အံ့သောငှါအခြားသူများနှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဝေမျှဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Sweet Laur...
Miami 2.0 သည်မန်ဟက်တန်တိုင်းရင်ပြင်အသစ်ကြော်ငြာ #movetomiami ၏အသစ်စက်စက်ပုံစံဖြင့်ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာသည်
2021-05-06 19:56:09 | ဘဝ
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကမေလ ၃ ရက်နေ့တွင်မန်ဟက်တန်ရှိ ၇ လမ်းနှင့် ၇၈ လမ်းရှိအလုပ်သမားများသည် The New Square Times Square ၏ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ကိုပြသခဲ့သည်။ အနီရောင် Coca-Cola LED အလံများနှင့်ကြော်ငြာများသည် The Opera ၏ Phantom ၏ကြော်ငြာများဖြစ်သည်။ Big Apple ရဲ့ Broadway Theaters တွေကိုတစ်နှစ်ကျော်ကြာပိတ...
2021-05-06 07:15:14 | ဘဝ
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Twitter ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင် Instagram ရှိအချိန်အများစုမှာကာရစ်ဘီယံအပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းတွင်ဖမ်းဆီးရမိသော Instagram အချိန်များ၌မော်ကွန်းတင်သောနေဝင်ချိန်များသို့မဟုတ်ရေဖျံသောက်စရာများပါဝင်သည်။ သို့သော်ဇိမ်ခံ Hodges Bay Resort & Spa သည်owရာမနေရာတစ်ခုအတွက်သီးသန့်ထည့်သွင်းထားသေ...
ဒီ smart mixer အသစ်ဟာအစွမ်းထက်ပါတယ်
2021-05-05 21:11:57 | ဘဝ
Facebook ပေါ်မှာမျှဝေပါ TwitterShare တွင် Linkedin တွင်မျှဝေပါအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကိုယ်ပိုင်ဖျော်ရည် / ရေဓာတ်ဖြည့်စနစ်သစ်ကျွန်ုပ်သည် NutriBullet ကိုအမြဲတမ်းပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်နောက်ဆုံး၌ပြတ်သွားသည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်စွာရောနှောပြီးနေ့စဉ်ဖျော်ရည်များနှင့်ကိုက်ညီသောအရွယ်အစားကိုရှင်းလင်...
Berkshires ရှိဇိမ်ခံဆေးခြောက်ဌာနခွဲဖြစ်သောသူပုန်သည်စဉ်းစားဟန်ရှိသောဒီဇိုင်းနှင့် hygge ကိုလက်ခံသည်
2021-05-04 18:59:56 | ဘဝ
Facebook ပေါ်မှာမျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ဆေးခြောက်သည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာသည်။ နယူးယောက်မြို့အပါအ ၀ င်ပြည်နယ်များစွာသည်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်အဖြစ်စတင်လာသည်နှင့်အမျှလုပ်ငန်းရှင်များသည်စားသုံးသူစက်ရုံနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နည်းလမ်းသစ်များဖန်တီးနေကြသည်။ Rebelle ရဲ့အတ...
2021-05-03 22:53:50 | ဘဝ
Linkedin Fly FishingSnake River LodgeSnake River Sporting Club သည်နေရာအနှံ့အပြားရှိအပန်းဖြေစခန်းနှင့်လူနေအိမ်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်everythingက ၁၀၀၀ ကျော်မပျက်စီးရသေးသောမြေများနှင့်အမျိုးသားသစ်တောများဖြစ်သည်။ စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ထမင်းစားခန်းနှင့် Jackson Hole မြို့၏အခြားမြို့ကြ...
Marriott International မှ Chris Gabaldon သည်ဇိမ်ခံခရီးသွားခြင်း၏အနာဂတ်ကိုအကဲဖြတ်သည်
2021-05-03 21:58:00 | ဘဝ
Linkedin တွင် Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါ Marriott International အတွက်ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကAs္ဌဖြစ်သော Chris Gabaldon သည် Covid-19 နှင့်ထူးခြားသောဇိမ်ခံခရီးသွားခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထူးခြားသောရှုထောင့်မှရှုမြင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအခါကမ္ဘာကြီးသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင...
2021-05-03 21:40:10 | ဘဝ
ချီကာဂိုရှိပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာရှိ Linkedin3Arts Club Café၌ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါခေတ်သစ်အမေရိကန်အစားအစာများကိုလှည့်ကွက်များနှင့်အတူဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၃ Restoration HardwareOpenTable ရှိ Arts Club Caféမှနာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်နေရာသည် ၂၀၂...
Tommie Austin ဟိုတယ်ကိုအထူးသီးသန့်မြင်တွေ့နိုင်သည်
2021-05-03 20:45:16 | ဘဝ
Linkedin တွင် Facebook ပေါ်တွင်မျှဝေပါ TwitterShare တွင် Linkedin Tommietommie Austin ၏ lob ည့်ခန်း၏အစိတ်အပိုင်းသြစတေးလတွင်နောက်ထပ်ဟိုတယ်အိမ်အသစ်တစ်ခုထပ်မံရရှိသည်။ အဆိုပါ Tommie သည်အဆက်အသွယ်မရှိသော check-in နှင့်အခန်းများသို့မိုဘိုင်း ၀ င်ရောက်ခြင်းစသည့်သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူဟိုတယ်အတွေ့အကြုံနှင့...
Kentucky ဒါဘီ 2021: ရာထူး၊ နံနက်အလေးသာမှုနှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြိုးစားအားထုတ်မှုများ
2021-05-03 00:19:11 | ဘဝ
Twitter ရှိ Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေပါ Linkedin LOUISVILLE, KENTUCKY - 27ပြီ ၂၇: Kentucky၊ ၂၀၂၁ Louisပြီ ၂၇ ရက်၊ Louisville, Churchill Downs တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်Churchပြီလ ၂၇ ရက်၊ Churchill Downs ၌ဒါဘီတွင် Kentucky အတွက်လေ့ကျင့်နေစဉ်။ (Andy Lyons / Getty Images မှဓာတ်ပုံ။ ) Getty Images ၂၀၂၁ ကင်တပ်ကီဒါဘီပြ...
2021-05-02 19:24:04 | ဘဝ
Linkedin တွင် Facebook တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါဘယ်ဘက်မှညာသို့: Derrumbes Zacatecas Tequilana Weber mezcal joven, Cascahuín tahona blanco, Fuenteseca . . . [+] အပိုဆောင်းañejo, Don Fulano Blanco, Clase Azul reposado, El Tequileño Reposado Rare, San Bartolo mecalo , Fortaleza Still Strength, C...
Kentucky ဒါဘီ 2021 ရလဒ်များ - မက်ဒီနာနတ်သည် ၇ ယောက်မြောက်ကီကီဒါဘီနည်းပြအတွက်အနိုင်ရရှိခဲ့သည် Bob Baffert၊ Mandaloun နေရာများ၊ Hot Rod Charlie Shows
2021-05-02 16:24:33 | ဘဝ
Linkedin LOUISVILLE, KENTUCKY - မေ 01: ဂျော်ဂျွန်ဗယ်လာစကတ်စီးနင်းသောမက်ဒီနာနတ်ဝိဇ္ဇာ (၈) သည်မင်ဒါလူးရှေ့ရှိကီတာကီဒါဘီ၏ ၁၄၇ ကြိမ်မြောက်ထုတ်ဝေမှုကိုအပြေးပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသည်။ Kentucky, Louisville, 2021, May 20, Churchill Downs တွင် Florent Geroux စီးနင်းသောနံပါတ် ၇ နှင့် Flavien Prat စီးနင်းသော Hot Ro...
2021-05-02 13:17:32 | ဘဝ
Linkedin တွင် TwitterShare တွင်မျှဝေပါ။ Linkedin တွင်အီတလီသည်လူအများအိပ်မက်မက်သည့်စာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှပါ ၀ င်ပြီးကူးစက်ရောဂါပြီးနောက်ခရီးသွားပြန်သည်။ သို့သော်ဤ . . . [+] ဝယ်လိုအားသည်ထိုသို့ပျံသန်းရန် ပို၍ ခက်ခဲပြီးစျေးကြီးစေနိုင်သည်။ လေကြောင်းလိုင်းကလေ ထို့အပြင်၎င်းသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး၎င်း...
Affionado roasters များသည်လက်လီလုပ်ငန်းများနှင့်စည်သွတ်ဘူးအဖျော်ယမကာလိုင်းများကိုစတင်သည်
2021-05-02 10:54:21 | ဘဝ
နောက်လတွင် Afflionado ကော်ဖီ Roasters ကသူ၏ပထမဆုံးလက်လီအရောင်းဆိုင်ဖြစ်သောမန်ဟက်တန်အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ၁၁၅ ရိပ်သာလမ်းရှိကဖေးကိုဖွင့်လိုက်သောအခါတွင်ပူးတွဲတည်ထောင်သူများအကြားဆက်သွယ်မှုစတင်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ၏နိဂုံးကိုပြလိမ့်မည်။ နှင့်ကော်ဖီစိုက်ပျိုးသူများနှင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဒီလင့်ခ်ကိုနိုင်ငံအနှ...
Alila marea ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းသည် San Diego မှကမ်းခြေသို့မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဆောင်ကျဉ်းပေးသည်
2021-05-02 01:02:17 | ဘဝ
Linkedin တွင် Facebook တွင်မျှဝေပါ TwitterShare တွင် Linkedin တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာ Alila Marea သဲသောင်ပြင်သည် San Diego ကမ်းရိုးတန်း၏အကောင်းဆုံးအမြင်များကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Alila Marea သဲသောင်ပြင်အပန်းဖြေစခန်းယခုနှစ်နွေရာသီတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော Alila Marea သဲသောင်ပြင်အပန်းဖြေစခန်းသည် San Diego ကမ်းခြ...